Imingcwabo iyingozi kwiCovid-19 - Ilanga News
Home Izindaba Imingcwabo iyingozi kwiCovid-19
Imingcwabo iyingozi kwiCovid-19
Kuzanywa ukuba lesi sifo singabulali abawu-2000 ngosuku njengase-USA
UMNU Bheki Cele, onguNgqungqoshe wamaPhoyisa, ekhuluma nabo-mthetho eThekwini.
UNGQONGQOSHE wamaPhoyisa, uMnu Bheki Cele, ukhale ngemingcwabo ayichaze njengengozi enkulu ukusabalalisa igciwane leCovid 19.
UMnu Cele ethula inkulumo eThekwini izolo, uthe imingcwabo yabantu abasuka ezifundazweni iGauteng, iWestern Cape naKwaZulu-Natal ilibhekise e-Eastern Cape, iseyinkinga kakhulu njengoba ibhebhethekisa leli gciwane eseliphenduke umashayabhuqe emhlabeni.
Unxuse amaphoyisa ukusiqinisa kakhulu isandla ngemingcwabo ngoba baningi abantu abasaphula imithetho ngayo.
“Isibalo sabantu okumele babe semingcwabeni kasikashintshi, sisamile ku-50, ngale kwalokho amaphoyisa kumele enze umsebenzi wawo,” kusho uMnu Cele.
Uqhube ngokuveza ukuthi nakusona lesi sibalo sika-50, imindeni eshonelwe kumele ithole igunya lokubamba umngcwabo.
Ukucacisile ukuthi yimantshi nomphathisiteshi wamaphoyisa onegunya lokukhipha incwadi egunyaza ukuba kubanjwe umngcwabo.
Uphinde waveza ukuthi ngemuva komngcwabo, wonke umuntu kumele abuyele emzini wakhe.
Usigxekile isenzo salabo ababamba abakubiza nge-after tears, ngemuva komngcwabo njengoba ekubeke kwacaca ukuthi kakukho emthethweni ngakho amaphoyisa kumele nalapho enze umsebenzi wawo ngokuhlakaza, uma kunesidingo, abophe.
UMnu Cele, obekhuluma namaphoyisa angaphansi kwezinhlaka ezahlukene eThekwini, uthe kumele asiqinise isandla ngezimvume ezitholwa ngabantu ukuya emsebenzini.
Ukhale ngobanjwe ngoLwesibili obenemvume yokuya emsebenzini ukuyokwenza ophaya.
Uthi lokhu kukhombisa ukuthi kunezimvume eziphuma ngoku-ngemthetho.
“Kumele isandla siqine ngempela ngalezi zimvume futhi amaphoyisa kumele awuqinise umthetho,” kusho uMnu Cele.
Uphinde wanxusa amalungu omphakathi ukubambisana namaphoyisa njengoba leli lizwe libhekene nesimo esingajwayelekile.
Uthe lesi simo sidinga zonke izinhlaka ezahlukene ukuba zisebenze ngokubambisana ukuqinisekisa ukuthi yonke imithetho ebekiwe iyalandelwa.
* Khonamanjalo, uMnu Cele uphinde wakhala ngokusabalala kotshwala athi kusaqhubeka ezindaweni ezahlukene.
Uphinde wawakhumbuza amaphoyisa ukuthi uma ethola lapho kuthengiswa khona
utshwala, angananazi abophe futhi aphinde abuthathe bonke utshwala neziqandisi zakhona.
Unxuse nomphakathi ukuba ukuqonde ukuthi kakumele uthuthe utshwala ngoba uma kukhona abatholakalayo, bazoboshwa.
UMnu Cele ubekhuluma kanje nje, kuzokhumbuleka ukuthi sisaqhubeka nokwanda isibalo sabantu abatholakala behaqwe yileli gciwane eNingizimu Afrika njengoba bebalelwa ku-3465 kanti sekushone abawu-58.
Uphethe ngokuveza ukuthi kakumele elakuleli lifinyelele esikhathini lapho sekushona khona abantu abangaphezulu kuka-2000 ngosuku njengoba kwenzeka eMelika kulezi nsuku.
Previous articleIkhonondise ungqongqoshe wamaphoyisa eyamaphara
Next articleangase avumbuke kwi-Highlands uPhala